Sezvo vatengesi vanoshanda neakawanda evhidhiyo zviyero - kubva kumafaira emabhurawuza akasiyana, zviyero zvematanho akasiyana, uye kudzvanya kweyekuteedzera kwakaringana, kushanda kuburikidza nevhidhiyo editing chikuva kuburitsa mafaera anodiwa kunogona kunetsa. Chigadzirwa chakanakisa uye chinodhura chandakashanda nacho kuita izvi Wondershare Video Converter Ultimate.
Semuenzaniso, femu yangu iri kuendesa a Shopify Uyezve chengetera mutengi wefashoni izvozvi uye taive navo vanosanganisira pfupi vhidhiyo kupfura kwechigadzirwa chimwe nechimwe pane yavo saiti. Vhidhiyo mbishi yainakidza, asi taifanira kudzoreredza, kudzvanya, uye kushandura mavhidhiyo kuita MP4 fomati kuti atakure nekukasira paShopify. Nemazana emavhidhiyo, zvingadai zvakatora mazuva ndichishandisa chishandiso chekugadzirisa… asi neWondershare UniConverter, ndakakwanisa kuseta mutsara uye kungoburitsa akawanda mafaera evhidhiyo anodiwa munhanho imwe chete!
Ini ndashandisawo chikuva ichi kushandura uye kuburitsa iyo yakakodzera kumashure vhidhiyo filetypes inodiwa kune yega browser mhando, kusanganisira. MP4, WebM uye OGG.
Rondedzero yezvimiro zvinosanganisirwa neWondershare inotambanuka kupfuura mabasa aya, zvakadaro. Nesoftware, iwe unokwanisa:
Bulk Convert Videos - Shandura kuenda uye kubva kune anopfuura chiuru mafomati, anosanganisira animated maGIF (kubva kuvhidhiyo kana mifananidzo).
Bulk Compress Vhidhiyo -Deredza saizi yefaira yemavhidhiyo ako kusvika pa90% uchichengetedza goho nekugadziriswa.
Bulk Edit Videos - Cheka uye zvirimwa mavhidhiyo, wedzera zvinyorwa zvidiki, wedzera watermark, wedzera mhedzisiro, gadzirisa vhidhiyo kumhanya, gadzirisa metadata, kana gadzirisa odhiyo.
Bulk Merge Videos - Unganidza akawanda mavhidhiyo mune imwe… Muenzaniso: Kuwanda wedzera intros kana outros.
Rekodha Vhidhiyo -Rekodha akawanda skrini, shandisa yako webcam, uye mamwe maodhiyo ekuisa.
Ridzai Mavhidhiyo - Tamba HD, Full HD, 4k, 8k, kana maDVD ane yavo vhidhiyo inoridza.
Dhaunirodha Mavhidhiyo Epamhepo - dhawunirodha mavhidhiyo ese ekutamba, chengetedza kune chero fomati, kana shandura kuMP3s.
Kupisa Mavhidhiyo -Pisa mavhidhiyo kuDVD, Pisa DVD odhiyo kuCD, kopira maDVD, kana shandura maDVD kune chero chinobuda.
Wondershare UniConverter inowanikwa zvose Windows uye Mac OSX. Heino mhedziso yesoftware:
Iyi puratifomu zvakare ine imwe sarudzo yekunyorera yekuwedzera-pane maficha chaiwo eMac OSX:
Watermark Mharidzo - wedzera mameseji kana mufananidzo watermark kuvhidhiyo yako
Background Remover - bvisa kumashure otomatiki uchishandisa artificial intelligence (AI)
Subtitle Mharidzo - gadzira uye gadzirisa zvinyorwa zvidiki (saizi, font, uye ruvara).
Smart Trimmer - cheka zvine hungwaru mavhidhiyo ako uchishandisa AI
Auto Reframe yeMac - gadzirisa otomatiki mavhidhiyo epuratifomu yega yega.
Nhanganyaya kana Outro Mharidzo - yakawanda wedzera intros kana outros kumavhidhiyo ako
Tenga Wondershare UniConverter
kuburitsa: Ini ndiri fan wepuratifomu uye ndiri kushandisa yangu affiliate link ye Wondershare Video Converter Ultimate munyaya ino.
Tags: yakawanda wedzera vhidhiyo watermarkbulk compress mavhidhiyozvakawanda shandura mavhidhiyomavhidhiyo akawanda ekugadzirisamavhidhiyo akawandayakawanda vhidhiyo introbulk vhidhiyo manejayakawanda vhidhiyo outroMac osmac osxMacosMOVMP4OSXuniconverterkudzvanywa kwevhidhiyokutendeuka kwevhidhiyokusangana kwevhidhiyovhidhiyo bhokisi rekushandisawebmmahwindowindows yakawanda vhidhiyo mupepetizvishawarekushamisika uniconverter